Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guuldarradii ay kala kulmeen kooxda Athletic Bilbao?? – Gool FM
(Madrid) 15 Jan 2021. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa qabtay shir jaraa’id oo uu kaga hadlay guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay Athletic Bilbao, kulankii afar dhamaadka ee tartanka Spanish Super Cup.
Athletic Bilbao ayaa jaratay tikitka finalka Spanish Super Cup kaddib markii ay kaga adkaatay 1-2 kooxda Real Madrid kulankii xalay ee afar dhamaadka ahaa ee tartankan.
Taageerayaasha kubadda cagta ee Spain ayaa waxay jeclaayeen inay arkaan kulanka El Clasico ee finalka Spanish Super Cup xilli ciyaareedkan, laakiin Real Madrid ayaa ku guuldareysatay inay ka gudubto halista kooxda Athletic Bilbao.
Haddaba Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ciyaarta kaddib ka soo muuqday shir jaraa’id wuxuuna ka hadlay dhowr arimood isaga oo yiri:
“Si fiican ugama bilaaban ciyaarta, waxay naga dhaliyeen labo gool, markaas kaddibna wax walbana way adkaadeen.”
“Qeybta labaad waxaan u ciyaarnay si wanaagsan laakiin kuma guuleysan inaan soo laabano.”
“Waxaa jiri doono hadalo badan oo cambaareyn ah sababa la xiriira wixii dhacay awgood, laakiin waxaan sii ahaan doonaa kuwa diirada saara wax walba, mana joojin doonno ka fikirida inaan horay u sii socono.”
“Waa in aanu sii wadnaa shaqada adag, ma jiro wax kale oo doorasho ah, marka ay arimuhu si fiican u socon waayaan, waa inaad sii wadataa shaqada oo aad ku adkaysato.”
“Hada waa inaan nasanaa oo aan isku diyaarinaa kulanka soo socda, weybta labaad waxaan isku daynay inaan natiijada badelno laakiin taas kuma guuleysan.”